China 99% Dipropylene glycol monomethyl ether (DPM) CAS 34590-94-8 fekitari uye bhizimisi | Dzidziso
Propylene glycol monomethyl ether dzakateedzana (PM, DPM)
Chinhu Propylene glycol monomethyl ether (PM) Dipropylene glycol monomethyl ether (DPM)
Molecular fomula CH3O (CH3CHCH2OH CH3OC3H6OC3H6OH
Chitarisiko Isina kuchena uye yakajeka mvura (Premium Giredhi) Isina mavara uye yakajeka mvura (Indasitiri Giredhi) Isina kuchena uye yakajeka mvura
Rucheno (GC)% ≥ 99.5 99.0 99.0
Distillation dungwerungwe (℃ / 760mmHg) 117.0-125.0 120.0-136.0 180.0-195.0
Mhute (KF)% ≤ 0.1 0.1 0.1
Acidity (se HAC)% ≤ 0.01 0.02 0.01
Giravhiti chaiyo (d420) 0.921 ± 0.005 0.921 ± 0.005 0.950 ± 0.005
Ruvara (Pt-Co) ≤ 10 10 15
Pasuru uye zvifambiso 190KGS / Drum Inokuvadza kemikari 200KGS / Drum Yakajairika kemikari
Kushanda mukupfeka: PM, yakaderera chepfu uye yakasimba yakasimba, inoshandiswa zvakanyanya seye solvent uye yekubatanidza mumiriri weinki, kupenda kupenda uye pendi yemvura. Iyo inokodzera benzene propylene emulsion, propylene alkene acid emulsion uye pendi yaro yeemulsion, ayo anozivikanwa nekudzikisa tembiricha yekumhanyisa, kumhanyisa kubatana kwayo uye kuchengeta kupfeka kuri mune yakanaka mamiriro.
Kushanda mumushonga wezvipembenene: PM inonyanya kushandiswa sepakati metolachlor ye weedicide, uye seanomiririra mumiriri we pesticide emulsion.
Zvimwe zvikumbiro: PM inogona kushandiswa mu-anti-freezer yemafuta, yekuchenesa, yekubvisa, uye ore-yekupfeka mumiririri kune isiri-feri simbi. Uye zvakare, inogona kushandiswa senge zvinhu zve organic synthesis, dyestuff yekudhaya uye machira, uye solvent yemafuta ekuruka.
DPM inoshandiswa seye solvent yePVC stabilizer, nitrocellulose, ethyl cellulose, polyvinyl acetate, solvent yependi uye dyestuff, uye chinhu chekupwanya fluid Inogona kushandiswa seye solvent yekudhinda inki, enamel pendi, kucheka fluid uye oiri oiri; seyakabatanidza mumiriri wepende-yemvura (inowanzo shandiswa nekusanganisa); seye inoshanda solvent yemvura-based pendi; seye solvent uye yekubatanidza mumiririri weimba neyemaindasitiri yekuchenesa, kubvisa girisi nependi, yekuchenesa simbi uye yakaoma nzvimbo; se base solvent uye yekubatanidza mumiririri we solvent-mhando sirika-skrini yekudhinda inki; seye solvent uye yekubatanidza mumiririri wevat dye machira; seanobatanidza mumiririri uye anomiririra ganda-mune yekuzora fomula; se stabilizer yemushonga uye kuumbiridza? mumiriri wepasi rinojekesa.
Pashure: CAS 84434-11-7 TPO-L muUV inorapa machira uye Photoinitiator
Zvadaro: 99.9% Dichloromethane / Methylene dichloride cas 75-09-2
Yakakwira giredhi 99.9% DMSO Dimethyl sulfoxide cas 67 ...
99% Diethylene glycol monoethyl efa acetate (D ...
High grade 98% Triethylene glycol monomethyl et ...